'रेशमको रिहाइ र संविधान संसोधन जसपाको माग हो, सत्ता स्वार्थको साधन होइन'
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राज बन्दीहरुको रिहाइ तुरुन्त र निःशर्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. बाबुराम भट्टराईले जसपाको मागहरु सत्ता स्वार्थमा मोलतोलका लागि प्रयोग हुन नहुने भन्दै रेशम चौधरी लगायत सबै राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइ तुरुन्त र निःशर्त गर्न माग गरेका छन् ।
थारू लगायत उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकार सहितको राज्य पुनर्संरचना हुनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने जसपाको सर्वसम्मत र निरन्तरको अडान रहेको पनि डा. भट्टराईले बताएका छन् ।
डा. भट्टराईले जसपाले निरन्तर रुपमा उठाउँदै आएका मागहरु अहिलेको सत्ता स्वार्थमा मोलतोल हुनै नसक्ने भन्दै आफ्ना मागहरु तत्काल पूरा गर्न भनेका छन् । उनले आफूहरु र पार्टी प्रष्ट भएको अवस्थामा भ्रमको खेती नहोस् भन्दै चेतावनी पनि दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति : चैत १३, २०७७ शुक्रबार ९:५५:२,